MAHALEO PZL Mil Mi-2 Hoplite FSX & P3D
Misaotra an'i George Arana (Eagle Rotorcraft Simulations) tamin'ny niovaon'ity finday taloha ity add-on amin'ny teratany FSX ary P3D endrika v4.
Aza adino ity angidimby ity dia tokony hanomboka amin'ny maody Cold & Dark, tsy mandeha ny asan'ny CTRL + E, tokony hamaky tsara ny boky ianao satria tsy mora ny manomboka ireo motera roa. Misy horonan-tsary fampianarana eto amin'ny faran'ity pejy ity, saingy tsy dia manampy firy. Raha te-hanao lesona an-tsary ianao dia liana amin'izany izahay.
Ny mil Mi-2 (anarana marika NATO dia "Hoplite") dia novolavolaina tao amin'ny Firaisana Sovietika taloha nataon'i Mil Design Bureau tamin'ny fiandohan'ny taona 60 tany ho toy ny milina turbine mpanamboatra ny hare-Mi-1.
Ny sidina voalohany dia tamin'ny 1961 ary ny famokarana andiany dia nanomboka ny taona 1965 tamin'ny alàlan'ny polish WSK-Swidnik (PZL-Swidnick) ankehitriny ary nifarana tamin'ny taona 1985. Maherin'ny 5200 Mi-2 no naorina hatramin'ny 1965 indrindra ho an'ny Sovietika taloha sy ny teo aloha. Firenena Warsaw Pact ary mbola maro an'izany. Ny Mi-2 dia nahita asa be niarahan'ny miaramila sy ny fanjakana ary ny mpandraharaha. Ankoatra ny fitaterana entana sy mpandeha, ny Mi-2 dia nahita asa ihany koa toy ny fiara mpamonjy voina, polisy, ary helikoptera Search-and-Rescue.
izany add-on maneho ny variants telo:
• Fitaterana miaramila (tontonana rosiana)
• Fitaterana mpandeha tsotra (tontonana anglisy)
• Ambulance (Budapest Aircraft Service HA-BGH - tontonana Hongroà)
Modely azo antoka sy antsipirihany
Jiro anatiny sy ivelany
2D tontonana sy kitapo 3D virtoaly feno azo tsindrio
Fizarana biby (varavarana, mpanamory, mpanova, fambara amin'ny fihetsika ao amin'ny VC, sns)
Fampivoarana mahazatra (toy ny efitra lamba IFR ao anaty kaomina virtoaly)
Dinamika sidina tena azo tantainin'ireo mpanamory fiaramanidina Mi-2 tena izy
Betsaka ny rafitra simika (firehitra afo, de-ice, fanatsarana mihatsara, elektrika sns.)
Downloads 8 646
Model voalohany nataon'i Nemeth Designs. FSX/P3D fiovam-po teratany avy amin'i George Arana / Eagle Rotorcraft Simulations